ကုလားအုတ်၊ အလွန်ထိရောက်သောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်း Absolut ခရီးသွားခြင်း
ဒံယလေက | | အဲဂုတ္တုပြည်၌
လွန်ခဲ့သောအနှစ် ၃၀၀၀ ခန့်ကဖြစ်ပျက်ခဲ့သောရှေးခေတ်ကတည်းကလူတို့သည်ယင်းကိုအသုံးပြုခဲ့ကြသည် ကုလားအုပ် ကမ္ဘာ့အချို့ဒေသများ၌ထိရောက်သောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒီခွာကျွဲနွားတွေဟာအဆီသိုက်တွေကြောင့်ကျော်ကြားတယ် (မင်္ဂလာပါ) က၎င်း၏နောက်ကျောကနေပေါ်ထွက်လာ, လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာကလူအားဖြင့်အိမ်မွေးခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည်အစားအစာ (နို့နှင့်အသား) ဖြစ်ဆဲဖြစ်ဆဲဖြစ်သော်လည်းသူတို့၏အရေပြားကိုအစဉ်အလာအ ၀ တ်အထည်များပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။ သို့သော်အရေးကြီးဆုံးမှာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းတစ်ခုအနေဖြင့်ဖြစ်သည်။ အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် အထူးသဖြင့်အဆင်ပြေအောင်သူတို့ရဲ့အထူးသခန္ဓာဗေဒ သဲကန္တာရ။
သို့သော်သတိပြုသင့်သည်မှာကမ္ဘာပေါ်ရှိကုလားအုတ်အားလုံးသည်တူညီခြင်းမရှိသကဲ့သို့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်လည်းအသုံးပြုခြင်းမရှိကြပါ။ သူတို့ကကမ္ဘာပေါ်မှာတည်ရှိ မျိုးစိတ်သုံးမျိုး ကုလားအုတ်များ
Bactrian ကုလားအုတ် (Camelus bactrianus ဖြစ်သည်) အာရှအလယ်ပိုင်းမှာနေထိုင်တဲ့။ အခြားမျိုးစိတ်များထက် ပို၍ ကြီးပြီးပိုလေးသည်။ ၎င်းတွင်နှစ်ချက်တိုင်ရှိပြီးအသားအရေမှာသိုးမွှေးဖြစ်သည်။
ရိုင်း bactrian ကုလားအုတ် (Camelus ferus ဖြစ်သည်) နှစ်ခုတောင်နှင့်အတူ။ ၎င်းသည်မွန်ဂိုလီးယား၏သဲကန္တာရလွင်ပြင်များနှင့်တရုတ်ပြည်တွင်းရှိအချို့ဒေသများတွင်လွတ်လပ်စွာနေထိုင်သည်။
အာရေဗျကုလားအုတ် o ဒေါက်တာဘွဲ့ (Camelus domedariusကမ္ဘာပေါ်တွင်လူ ဦး ရေ ၁၂ သန်းခန့်ရှိပြီးလူကြိုက်အများဆုံးနှင့်မျိုးစိတ်များစွာရှိသည်။ တောင်တစ်ခုတစ်ခုတည်းရှိတယ်။ ၎င်းကိုဆာဟာရဒေသနှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသများတွင်တွေ့ရှိရသည်။ ဒါဟာအစနောက်ပိုင်းတွင်သြစတြေးလျတွင်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ကုလားအုတ်တစ်ကောင်သည်အမြန်နှုန်းတစ်နာရီ ၄၀ ကီလိုမီတာအထိရောက်ရှိနိုင်သည် ရေတစ်စက်ကျဆင်းခြင်းမရှိဘဲကြာရှည်စွာခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့် dromedary သည် ၁၀ ရက်တစ်ကြိမ်သောက်ရုံမျှဖြင့်ကောင်းမွန်စွာနေထိုင်နိုင်သည်။ အပူကိုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းသည်အထင်ကြီးစရာကောင်းသည်။ ၎င်းသည်ကိုယ်ခန္ဓာထုထည်၏ ၃၀% အထိဆုံးရှုံးပြီးနောက်၌ပင်အပူဆုံးသဲကန္တာရများတွင်ရှင်သန်နိုင်သည်။
ဤတိရိစ္ဆာန်များသည်ဤမျှနည်းသောရေဖြင့်အသက်ရှင်ရန်မည်သို့စီမံခန့်ခွဲသနည်း လျှို့ဝှက်ချက်မှာ အဆီ သူတို့ရဲ့တောင်ပေါ်မှာစုပြုံ။ ကုလားအုတ်၏ခန္ဓာကိုယ်သည်ရေဓာတ်ဖြည့်တင်းရန်လိုအပ်သောအခါထိုသိုက်ရှိအဆီတစ်ရှူးများကိုဇီဝြဖစ်။ ရေထုတ်လွှတ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင်၏ကျောက်ကပ်နှင့်အူအရည်ပြန်လည်စုပ်ယူရန်အလွန်စွမ်းရည်ရှိသည်။
သို့သော်၎င်းကကုလားအုတ်သည်ရေမရှိဘဲအသက်ရှင်နိုင်သည်ဟုမဆိုလိုပါ။ သောက်ရန်အချိန်ရောက်သောအခါ ၆၀၀ ကီလိုဂရမ်အရွယ်ရောက်သောကုလားအုတ်တစ်ကောင်သည် ၃ မိနစ်အတွင်းလီတာ ၂၀၀ အထိသောက်နိုင်သည်။
နို့တိုက်သတ္တဝါအများစုတွင်ရှာရန်မဖြစ်နိုင်သည့်ရေငတ်ခြင်းနှင့်အပူကိုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းသည်ဤသတ္တ ၀ ါကိုသရဖူဆောင်းထားသည် တော၌ရှင်သန်ရန်လူသား၏အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေ.
ရာစုနှစ်များစွာအတွက်, ယာဉ်တန်း ကုန်သည်များသည်ကုလားအုတ်ကို အသုံးပြု၍ သဲကန္တာရကြီးများကိုဖြတ်ကျော်ခဲ့သည်။ သူ့ကိုကျေးဇူးတင်ရလျှင်လမ်းကြောင်းများနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်များကိုတည်ဆောက်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဤအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်အရကုလားအုတ်သည်အာရှနှင့်မြောက်အာဖရိကရှိလူ့အသိုင်းအ ၀ ိုင်းများစွာ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အခြေခံကျသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသတိပြုသင့်သည်။
အကယ်၍ သဲကန္တာရသည်သဲသမုဒ္ဒရာဖြစ်ခဲ့လျှင်ကုလားအုတ်သည်၎င်းကိုသွားလာရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်ပြီးလုံခြုံသောဆိပ်ကမ်းကိုရောက်ရန်အာမခံချက်ဖြစ်သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်၎င်းကိုလူသိများသောကြောင့်ဖြစ်သည် "သဲကန္တာရသင်္ဘော".
ယနေ့ခေတ်တွင်မြေပြင်အနေအထားအမျိုးမျိုးရှိသောမော်တော်ယာဉ်များနှင့်ဂျီပီအက်စ်များသည်၎င်းကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်အစားထိုးလိုက်သောအခါကုလားအုတ်ကိုဘက်ဒိုဝင်လူမျိုးစုများစွာကအသုံးပြုနေဆဲဖြစ်သည်။ သို့သော်အချို့သောနိုင်ငံများတွင်သူ၏အခန်းကဏ္ new သစ်၌သူ့ကိုတွေ့မြင်ရန်မှာများသောအားဖြင့်ဖြစ်သည် ခရီးသွားဧည့်ဆွဲဆောင်မှု တစ် ဦး မော်တော်ယာဉ်အဖြစ်ထက်။
ပုံမှန်အတိုင်းမော်ရိုကို၊ တူနီးရှား၊ အီဂျစ်သို့မဟုတ်ယူအေအီးသို့သွားသောခရီးစဉ်များသို့ခရီးသွားများငှားရမ်းလေ့ရှိသည်။ သဲကန္တာရမှတဆင့်ကုလားအုပ်လေ့လာရေးခရီး။ သူတို့နှင့်အတူ (အတွေ့အကြုံရှိလမ်းညွှန်များလက်၌အမြဲရှိသည်) စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုရှာဖွေနေသောခရီးသွားများသည်အချည်းနှီးဖြစ်သောလူမဆန်သောနယ်မြေများသို့ ၀ င်ရောက်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်သဲကန္တာရ၏ကြယ်မိုsky်းကောင်းကင်အောက်တွင်တဲများ၌အိပ်ပျော်နေကြသည်။ ကုလားအုတ်သည်အချိန်ကုန်လွန်ပြီးမေ့ထားသည့်အချစ်နှင့်ခရီးသွားခြင်း၏ထူးခြားသောအမှတ်အသားဖြစ်သည်။
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အသုံးဝင်သောသက်သေပြနိုင်မှုအပြင်ကုလားအုတ်ကိုသမိုင်းတစ်လျှောက်တွင်လည်းအသုံးပြုခဲ့သည် စစ်၏လက်နက်။ ပြီးသားရှေးဟောင်းအတွက် Achaemenid ပါရှား သူတို့စစ်ဆင်ရေးမှာအလွန်အသုံးဝင်တဲ့ဒီတိရိစ္ဆာန်တွေရဲ့အရည်အသွေးကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်။ မြင်းတွှေသူ၏စွမ်းရည်.
ထို့ကြောင့်စစ်ပွဲများစွာတွင်ကုလားအုတ်များပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားသည့်စစ်သည်များ၏ပါ ၀ င်မှုသည်ပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်လာခဲ့သည်။ ရန်သူမြင်းစီးသူရဲဖျက်သိမ်းဖို့ပြီးပြည့်စုံသောဖယျရှား။ ဘီစီ ၆ ရာစုတွင်လစ်ဒီးယားနိုင်ငံကိုသိမ်းပိုက်ရာတွင်ရှေးဟောင်းစာရွက်စာတမ်းများစွာကကုလားအုတ်များ၏အခန်းကဏ္toကိုဖော်ပြသည်။
ကုလားအုတ်နှင့်ဒရုန်းသမားများသည်စစ်တပ်တွင်ပါဝင်ခဲ့ကြပြီးဖြစ်သည် မြောက်အာဖရိကနှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်း ရောမခေတ်မတိုင်မီ မှစ၍ အလွန်မကြာသေးမီအချိန်များအထိဖြစ်သည်။ ၏ပင်စစ်တပ် အမေရိကန် ၁၉ ရာစုတွင်သူသည်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်တွင်တပ်ဖြန့်ထားသည့်အထူးကုလားအုတ်ယူနစ်တစ်ခုကိုတီထွင်ခဲ့သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Absolut ခရီးသွားခြင်း » ကုလားအုတ်သည်အလွန်ထိရောက်သောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းဖြစ်သည်
သန္တာ sebas ဟုသူကပြောသည်
ကြောင်းနောက်ထပ် waveaaaaaaaaaa လျှင်
sebas coral အားပြန်ကြားပါ
sebas ကဆိုသည် ဟုသူကပြောသည်